Avy amin’ny loharano iray ihany
« Ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy » Jao. 1 :17
Avy amin’ny loharano anankiray ihany ny tanjakao sy ny fitomboanao amin’ny fahasoavana. Rehefa alaim-panahy sy zahan-toetra ianao ka mijoro amim-pahasahiana amin’ny maraina, dia azonao ny fandresena. Indray mandingana manakaiky ny fahatanterahan’ny toetra maha kristianina ianao amin’izay. Fahazavana masina avy any an-danitra no mameno ireo efitra maro ao amin’ny fanahinao, ary rivotra madio sy manim-pofona no manodidina anao.
Tombontsoa ho antsika ny miara-mijoro amin’ny fahazavan’Andriamanitra mitaratra amintsika. Toy izany no niarahan’i Enoka nandeha tamin’Andriamanitra. Tsy moramora tamin’i Enoka no niaina fiainana marina tamin’ny androny noho isika amin’izao fotoana izao. Mbola sarotra kokoa ny nitomboana tamin’ny fahasoavana sy fahamasinana tamin’ny andron’i Enoka, noho ny ankehitriny.
Tamin’ny alalan’ny vavaka sy ny firaisana tamin’Andriamanitra no nahafahan’i Enoka nandositra ny faharatsiana izay mitoetra amin’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny filana. Miaina amin’ny loza maro amin’ny andro farany isika ankehitriny, ka tsy maintsy mandray hery avy amin’ny loharano anankiray. Tsy maintsy miara-mandeha amin’Andriamanitra isika. Takina amintsika ny hisarahantsika amin’izao tontolo izao , satria tsy ho afa-bela mandrakariva amin’ny fahalotoana isika raha toa ka tsy manaraka ny ohatra nomen’ilay Enoka mpanompo nahatoky.
Firifiry moa ny olona malemy toy ny rano kanefa afaka manana ilay lohranon-kery tsy mba mandao. Vonon-kozaraina amintsika ny lanitra , mba ho mahery ao amin’Andriamanitra isika, ka hahatratra amin’ny fahafenoana ny toetra maha-lehilahy sy vehivay lehibe ao amin’i Jesosy Kristy. Nanao ahoana ny fitomboana ara-panahy azonao tamin’ny taon-dasa? Iza tamintsika no nahazo zava-tsoa sarobidy nifandimby , mandra-pahavoafafa ny fitsiriritana , ny fisehosehoana, ny hafetsifetsena, ny fialonana mbamin’ny fitiavan-tena ka ny zava-tsoa avy tamin’ny Fanahy ihany no sisa mitoetra – dia halemem-panahy, fandeferana, hamoram-po ary fanaovan-tsoa? Hanampy antsika Andriamanitra raha toa isika ka mifikira hatrany amin’ny fanampiana izay efa nomeny antsika.
Tsy misy voary hafa namboarin’Andriamanitra ka afaka manana fitomboana , fahatsarana , ary fahambonian-toetra tahaka ny olombelona. Tsy azon’ny olombelona atao ny mamolavola izay tiany atao amin’ny tenany . Fa amin’ny alalan’ny fahasoavan’i Kristyno hahafahany manana firoboroboana ara-panahy tsy tapaka. Aoka ny fahazavan’ny fahamarinana hazava ao an-tsainy ary aoka ny fitiavan’Andriamanitra hitosaka hameno ny fony, ka amin’ny alalan’ny fahasoavana izay zarain’i Kristy tamin’ny nahafatesany , dia ho lehilahy mahery izy, - ho zanaky ny tany kanefa ho mpandova tsy fahalovana.